विश्वको बैंक नोटहरू | यात्रा समाचार
त्यहाँ धेरै देशहरू छन् त्यसैले धेरै मुद्राहरू छन्। जे होस् आज केही युरोपेली देशहरूले युरोलाई मुद्रा र लिराको रूपमा साझा गर्छन्, मार्क वा पेसेटा पहिले नै ईतिहासको अंश हुन्, विभिन्न मुद्राको स still्ख्या अझै पनि असंख्य छ।
र प्रत्येक सिक्का, बदले, कानूनी टेन्डर बिल र सिक्का को सेट छ। मैले यस बारे लामो समयको लागि सोधेको छु र यो पोष्ट लेख्न विश्व बैंकनोटहरू कुन छनौट मापदण्ड प्रयोग गर्ने भनेर मैले सोच्दछु, र मैले निर्णय गरेको छु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मुद्राहरू: el अमेरिकी डलर, the यूरो, the येन र पाउन्ड स्टर्लिंग। तपाईंको टिकटहरू थाहा पाउनुहोस्!
2 पाउन्ड स्टर्लिंग
3 अमेरिकी डलर
5 जापानी येन
हामीलाई थाहा छ कि रोमी र ग्रीकहरूले सिक्का प्रयोग गर्थे, तर पैसा कहिले कागजमा देखा पर्‍यो?? विशेषज्ञहरूका अनुसार कागजमा पैसा पुरातन चीनमा XNUMXth औं शताब्दीमा देखा पर्‍यो y युरोपमा सत्रौं शताब्दीतिर स्वीडेनमा। तिनीहरू १। औं शताब्दीको अन्तमा स्पेन आइपुगेको जस्तो देखिन्छ।
सत्य यो हो कि कागजको पैसा द्रुत रूपमा लोकप्रिय भयो किनकि यो ढुवानी गर्न सजिलो थियो र धेरै हल्का थियो, यद्यपि हामीलाई राम्ररी थाहा छ कि उनीहरूले कहिल्यै सिक्का पूर्ण रूपमा बिर्सेनन्, तर उनीहरूसँगै बाँचे।
कानुनी प्रयोगमा अझै पनि विश्वको सबैभन्दा पुरानो मुद्रा ब्रिटिश पाउन्ड हो र अमेरिकी डलर, यूरो र जापानी येन पछि यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चौथो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मुद्रा पनि हो। त्यसो भए पहिले अंग्रेजी पाउन्डको बारेमा कुरा गरौं।
यसको उत्पत्ति तिनीहरू रोमन कब्जा को समय को लागी मिति। वास्तवमा, शब्द पाउन्ड ल्याटिनबाट आएको हो पाउन्डस, वजन। इ England्ल्यान्डको पहिलो राजाले बेलायती पाउन्डलाई पहिलो राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा अपनाए। त्यसबेला एक पाउन्डले १ 15 गाईहरू किन्न सक्थ्यो त्यसैले यो धेरै पैसा थियो।
को पहिलो नोट बैंक अफ इ England्गल्यान्डद्वारा जारी गरिएको थियो र कागजातहरू थिए हस्तलिखित। १1785 सम्ममा उनीहरू पहिले नै विभिन्न सम्प्रदायका साथ छापिएका थिए। आज त्यहाँ प्रचलनमा बैंक नोटहरूको धेरै श्रृंखलाहरू छन् र चार मानहरू:,, १०, २० र p० पाउन्ड स्टर्लिंग।
को P पाउन्ड बैंक नोटहरू तिनीहरू फेरोइज र निलो मा पोलिमर बाट बनेको छ र को चित्र को लागी चर्चिल, ब्लेनहाइम प्यालेस र एलिजाबेथ टावर, साथै १ 1940 XNUMX० को प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट एउटा अंश। यो पहिलो हो। पोलीमरमा छापिएको र २०१ 2016 मा प्रचलनमा गयो।
को P पाउन्ड बैंक नोटहरू तिनीहरू पनि बाट आएका हुन् पोलिमर र तिनीहरू सुन्तला रंगका छन्। तिनीहरूले एक चित्र बोक्छन् जेन अस्टेन (प्राइड एण्ड प्रेज्युडिसका लेखक), र यो उपन्यासको एउटा अंश जुन यसका नायकको चित्रण र गोन्टमर्सन पार्कको सुन्दर दृश्य, केन्टको हवेली। यसले डार्विन बोक्ने काम गर्‍यो तर गत बर्षको सुरूमा चलेको थियो।
को २० पाउन्ड बिल छोरा कागज को र बैजनी। तिनीहरूले को चित्र धारण आदम स्मिथ (पहिलो स्कटिश अ English्ग्रेजी नोटमा देखा पर्नेछ), र जेएमडब्ल्यू टर्नरको साथ पोलीमरले अर्को साल स्प्लान्ट हुनेछ। आफ्नो पक्ष को लागी, P० पाउन्ड नोट यो कागजले बनेको छ, रातो र color्ग, र स्टीम टेक्नोलोजीको प्रतिभा बोक्छ, बोल्टन र जेम्स वाट।
१ 1945 .50 देखि त्यहाँ कुनै पनि बिल XNUMX० पाउन्ड भन्दा बढी भएको छैन।
संयुक्त राज्य कांग्रेसले १ 1792 XNUMX २ मा डलर सिर्जना गर्‍यो। शब्द डलर सेक्सन शब्दबाट आएको हो थालर, एक व्यापक प्रयोग यूरोपीयन चाँदीको सिक्का। आज यो विश्वको सब भन्दा बलियो मुद्रामा एक हो, यो क्यान्डीको रूपमा छपाईएको छ, यो चालीस वर्ष भन्दा बढी पहिले डलरको मानदण्डको अधीनमा छैन र रूस र चीन जस्ता देशहरूले यसलाई आफ्नो सिंहासनबाट हटाउन कडा प्रयत्न गरिरहेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य आदानप्रदान।
संचलनमा नोटहरू १, २,,, १०, २०, and० र १०० डलर हो। को डलर बिल उनीहरूको चित्र बोक्दछन् जर्ज वाशिंगटन र तिनीहरू व्यापक प्रसारित छन्। भाग्यशाली आकर्षणको रूपमा एक डलर लगाउने प्रथा अझ लोकप्रिय छ। को दुई डलर बिल नेतृत्व थमस जेफसन र त्यहाँ धेरै प्रचलनमा छैन।
को पाँच डलर बिल नेतृत्व लिंकन एकातिर र अर्को लिंकन मेमोरियल। को दस डलर बिल उनीहरुसँग छ अलेक्जेंडर हैमिल्टन र ती 20 डलरaएन्ड्रयू जैक्सन। तिनीहरूको पक्ष को लागी Dollar० डलर बिल उनीहरुसँग छ अनुदान र अन्तमा Dollar० डलर बिल नेतृत्व बेंजामिन फ्रैंकलिन.
१ 1946 .100 पछि, १०० डलर भन्दा बढीको नोटहरू प्रिन्ट गरिएको छैन।
युरो 1993 देखि अवस्थित छ जब यूरोपियन युनियनको सन्धि लागू भयो त्यसबेला नै आर्थिक र मौद्रिक संघ निर्माण भयो। सन्धिको हिस्सा भएका देशहरूले केही सर्तहरू पूरा गर्नुपर्‍यो र त्यसबेलादेखि धेरै देशहरू जसले यसमा हस्ताक्षर गरेनन् एकीकृत भएका छन्।
१ 1999 XNUMX। मा, धेरै स्वतन्त्र मौद्रिक प्रणालीहरू अस्तित्वमा बन्द भए जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स, आयरल्याण्ड, इटाली सहित EU का ती एघार मौलिक सदस्यहरूको। यद्यपि नयाँ बैंक नोट र सिक्का नभएसम्म यूरो को लागी केहि बर्ष लाग्यो। क) हो, २००२ मा प्रचलनमा प्रवेश गर्नुभयो अमेरिकी डलर भन्दा कम केहि सेन्ट मूल्य।
यूरो नोटमा निम्न सम्प्रदायहरू छन्:,, १०, २०, 5०, १०० र 10०० युरो। EU मुद्राहरू जस्तो छैन एक अद्वितीय डिजाइन छ र तिनीहरू विभिन्न राज्यहरूमा मुद्रित छन्। संग बनेको छ शुद्ध कपास र उनीहरूसँग विभिन्न रंगहरू र सुरक्षा उपायहरू छन् जुन तिनीहरूलाई जालसाजी गर्न गाह्रो बनाउँदछ। जबकि सिक्काको राष्ट्रिय पक्ष हुन्छ, बैंक नोटहरूको उत्पत्ति सिरियल नम्बरको पहिलो अक्षरको साथ पहिचान हुन्छ।
El पाँच यूरो बिल सबैभन्दा सानो छ, छ खैरो र को एक चित्र छ शास्त्रीय वास्तुकला। को १० यूरो बिल यो अलि ठूलो छ, यो हो रातो र चित्र को हो रोमान्सक वास्तुकला। एउटा 20 यूरो यो अझै ठूलो छ, रंगीन नीलो, र को ड्राइंग संग गोथिक वास्तुकला.
El १० यूरो बिल मापन १mm० मिलिमिटर mm 140 मिमी, रंगीन छ सुन्तला र वास्तुकला यहाँ छ पुनर्जागरण। को १० यूरो बिल ठूलो छ, को हरियो रंग र को एक चित्र संग बारोक र रोकोको वास्तुकला। अन्तमा, त्यो 200 यूरो अझ ठूलो छ, १153 द्वारा mm२ मिमी, पहेंलो र एक डिजाइन संग आधुनिकतावादी र एक 500 यूरो १ 160० बाय by२ मिमी, को मापन गर्दछ बैंगनी र चित्र को हो आधुनिक वास्तुकला।
बिभिन्न वास्तुकलाको शैली को रेखाचित्र पछाडि, त्यहाँ चित्रहरु छन् जुन EU को बाहिरी क्षेत्रहरु जस्तै ग्वाडेलूप, Azores वा क्यानरी टापु, उदाहरण को लागि।
यसको उत्पत्ति युरोपियन उदाहरण अनुसरण गर्दै मेजी युगमा जापानको आधुनिकीकरणको अवधिमा मिल्छ। यसैले, देश मध्ययुगीन मुद्रा, परित्याग हन्सासु, तपाईंn १1871१ ले येनलाई अपनायो। दुई वर्ष पछि बैंक नोटहरू देखा पर्‍यो, तीन जालको साथ वर्तमान जापान एक देश हो जहाँ सिक्का व्यापक रूपमा र लोकप्रिय रूपमा प्रसारित हुन्छन्।
El १००० येन बिल यो नीलो रंगको छ र हिडियो नोगुची, माउन्ट फुजी, ताल मोटोत्सु र चेरी फूलहरूको चित्र बोकेको छ। को १००० येन बिल यो अलि ठूलो छ, बैजनी रंगको र इचिओ हिगुचीको चित्र र क्लासिक पेन्टि withको साथ; र १००० येन बिल यो खैरो रंगको छ, measures by० बाय measures mm मिलिमिटर मापन, र फुकुजावा युकिचीको चित्र र बौद्ध फिनिक्स छ
जापानी सरकारले आफ्नो मुद्राको मूल्यमा धेरै हस्तक्षेप गर्दछ जुन सामान्यतया वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति र माग द्वारा निर्धारित गरिन्छ। हाल, यो डलर मा ल्याउन दुई आंकडा लिन पर्याप्त छ। यो सत्य हो कि जापानी समाज ज्यादातर पैसा नगदको साथ व्यवस्थापन गरिएको छ, तर मैले, जो पछिल्ला तीन बर्षको यात्रा गरिसकें, भन्नु पर्दछ कि आजकल क्रेडिट र डेबिट कार्डहरू सबैको लागि तिर्न धेरै स्वीकार्य छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » विश्वको बैंक नोटहरू